Corona virus 'lethality | Apg29
Ndị nwụrụ China nwere ihe nkezi afọ 79 afọ.
O nwere ike ịbụ na-akpali mara na dị afọ a dị ka m dee ihe a, 2.131 ndị mmadụ nwụrụ nke coronavirus mgbe 67,839 nwụrụ si mgbe flu gburugburu ụwa. Ebe bụ na ụjọ mgbe ọ na-abịa n'oge a kara aka flu, nke tara immensely ọzọ ọnụ afọ a karịa coronavirus?
2 percent nke ndị bu nje site coronavirus n'ihe ize ndụ nke ịnwụ (1 nke 50). The enwe ọnụego tụnyere 10 percent maka SARS na pasent 34 MERS .
Corona virus adịghị egbu egbu. Otú ọ dị, ndị mmadụ na mie ọgụ, ndị ọrịa na ndị agadi, na-na n'ihe ize ndụ. Ndị nwụrụ na China nwere ihe nkezi afọ 79 afọ.
n'oge a kara aka flu
O nwere ike ịbụ na-akpali mara na dị afọ a dị ka m dee ihe a, 2.131 ndị mmadụ nwụrụ nke coronavirus, mgbe 67,839 nwụrụ si mgbe flu gburugburu ụwa. Ị na-ahụ na otosịrị iru?
Ebe bụ na ụjọ mgbe ọ na-abịa n'oge a kara aka flu, nke tara immensely ndị mmadụ ọnwụ afọ a karịa coronavirus?
The nwaanyị na Jonkoping
A izu ole na ole gara aga na-trumpeted ya na a nwaanyị na-elekọta na Jönköping. Ọ bụ otú ahụ dị nnọọ naanị enen ikpe nke coronavirus na Sweden.
Ọ nọwo na ụlọ ọgwụ kemgbe 31 January. Ugbu a anyị na-anụ ihe ọ bụla banyere otú ihe si aga ya. The n'ụlọ ọgwụ ga-ekwughị ihe ọ bụla na-akwanyere confidentiality.
Ma mgbe ha trumpeted banyere ọrịa ya a izu ole na ole gara aga yiri ka "confidentiality" ihe dị nnọọ mkpa. Otu nwere ike na-eche ihe mere.
The incubation oge
The incubation oge mgbe ọ na e oria bụ n'etiti 2-24 ụbọchị. Nke a pụtara na onye ahụ na-emetụta pụrụ ibu nje maka na- 24 ụbọchị tupu ọrịa.
Mgbasa-eme atụmatụ na otu nje onye nọ n'ihe ize ndụ nke ibute ọrịa n'etiti 3 na 4 ndị ọzọ. N'ihi ugboro ise ọzọ na-egbu egbu ọrịa SARS, a ọnụ ọgụgụ ahụ bụ ala: otu nje onye oria abụọ
Mgbe mbụ m nụrụ nke coronavirus , m meghachi omume ozugbo wee mmetụta na ihe adịghị mma. Na mgbe ahụ i kwesịrị maara na mgbe ọ bụghị ọtụtụ na-arịa ọrịa na ndị nwụrụ anwụ, ma ka iti full na drum na dọrọ aka ná ntị na virus.
Ugbu a ọzọ ọnwụ na-arịa ọrịa ma tụnyere ndị nkịtị n'oge a kara aka influenza bụ ka ọtụtụ. Ya mere m enyo na ihe na-ezighị ezi, ọ bụ a standoff.
Dị ka nke a edere, 75,782 mmalite coronavirus. Of ndị, 2.131 nwụrụ mgbe 16,971 gbapụtaworo.
2.131 nwụrụ anwụ
Ọ na-etinye ọtụtụ nde mmadụ na kwarantaini na mega-obodo China. Na niile, 56 nde mmadụ na Hubei Province echebekwa si n'èzí ụwa na a akụkụ buru ibu nke ndị bi na e nyere n'iwu na-anọ n'ime ụlọ.
Ịtụle otú ọtụtụ ndị e emetụta coronavirus, na otú ọtụtụ mmadụ na-anwụ site mgbe flu, o yiri ka ọ ghara ọ bụla rhyme ma ọ bụ ihe mere na ikeike jikoro na ị na-.
China si akụ etiti ka a mara ọkwa na-eji na ndetu ga-anakọtara, disinfected na-akpọchi elu maka 14 ụbọchị. Mgbe ahụ, ha na-tọhapụrụ na na ahịa ọzọ.
The kwarantaini izu abụọ
Na isi obodo Beijing bi ga-iche n'ụlọ ha maka izu abụọ mgbe ha na e-ejegharị ejegharị.
vehicular okporo ụzọ na-aju
Vehicular okporo ụzọ na-aju ugbu a na Hubei Province, ebe coronavirus ka kụrụ kasị. Exemptions emetụta uwe ojii ụgbọala, ambulances, ugbo ala nke oké mkpa ibu ma ọ bụ ndị ọzọ ụgbọala mmasị ijere ọha mmadụ ozi.
Health ndenye ego
Ịgachi ike ndenye ego ga-eme ka on niile bi Hubei Province. Companies ghara Malitegharịa ekwentị arụmọrụ ruo mgbe ha natara ikike site n'aka gọọmenti.
More nlekota na ịchịkwa
M nwere site nnọọ ná mmalite nwere nchegbu na e nwere ike ịbụ ọzọ burukwa n'azụ coronavirus. Na naanị ihe m na mgbe ahụ nwere ike na-eche nke bụ na ọ chọrọ na-ebu ihe nlekota na onyunyo nke ụmụ amaala ya.
China yiri ka otu n'ime ndị kasị achịkwa ma na ekwu na mba n'ime uwa. Ọ ga-now-ọbụna ihe na akara na nlekota? Ga coronavirus-abụ onye na ago na anyị mkpa karịa akara na nlekota ebe a na West?
The ụwa kụrụ aka
N'oge na-adịghị, China ga-eti mkpu na ha jisiri ịkwụsị na kwụsị malitere ịrịa ọrịa ka ụwa kụrụ aka, kama ka ha onwe-ha n'azụ Mpaghara ọbụna ihe gbasaa ya akara na nlekota ngwaọrụ?
M dị na-agụ na vt.se na "maka ụbọchị nke atọ na-ebelata ọnụ ọgụgụ nke ndị ọhụrụ edebanyere ikpe nke ọrịa na China. E na-egosi na e ji site na mba na-amalite iji mmetụta, dị ka a ọnụ na-ekwuchitere China si Ministry of Health." Ọfọn, ọma, na-atụle ihe m dị nnọọ dere.
Anyị bi a oké oge n'ụzọ doro anya egosi na ọ bụ oge ikpeazụ nakwa na Jizọs Kraịst ga-ina ya mụrụ ọzọ zọpụta ndị parish. Ị natara Jesus? Ị na-azoputa? Ọ dị elu n'oge ka i ya ugbu a!
Jizọs na-abịa n'oge na-adịghị!
SARS (Disease) - Wikipedia
MERS-CoV - Wikipedia
Corona Virus Update (Live): 76,206 ole na Ọnwụ si 2.247 COVID-19 Wuhan China Virus akasiaha - Worldometer
Ryhov Hospital jụ update nke Swedish Corona ndidi - Community News
The mbụ na-egbu egbu ikpe nke virus na Taiwan
Eri: coronavirus | Apg29